Akụkọ - otu esi arụ ọrụ mbuli elu 20ft
Onye njikwa akpa
Akụkọ na Ileba
otu esi arụ ọrụ mbuli elu 20ft
Taa, anyị na -eme mgbasa ozi nke ihe ọmụma, ihe mejupụtara Side Trailer Trailer
Truck Side Loader nwere ọtụtụ akụkụ
1. N'ịtụgharị akụkụ akụkụ nke ụgbọala na -adọkpụ, anyị nwere ike họrọ ka (PTO) kwadoro anyị, ma ọ bụ anyị nwere ike họrọ iji injin kwụụrụ onwe ya nye ike. Modzọ ike abụọ a na -enye ike maka kreenụ n'akụkụ akpa. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ bụrụ na ejikọghị ọkụ na traktọ, enweghị ike ịrụ ọrụ ya
2. Hydraulic 37-ton akpa n'akụkụ horeding kreenu. A na -etinye cranes ndị a n'akụkụ abụọ nke akpa ahụ na -ebuli chassis, ma na -ebunye ihe site na cylinders hydraulic na tubing hydraulic iji ghọta ọrụ mbuli elu nke crane.
2. Inye ọkụ. Injin dizel ma ọ bụ injin mmanụ etinyere na ụgbọala na -adọkpụ nke kreenụ ọ bụla na -enye ike ọkụ maka ụgbọ ala na kreenụ niile. N'ezie, anyị na -ahụkarị PTO nke ụgbọ ala anyị na -ebu iji nweta ike.
4. Mgbe eburu ụgbọ ala ahụ gaa ebe dabara adaba, ihe na-adọkpụ ihe na-adọkpụ ihe na-adọkpụ nwere ike iburu ibu nke ihe karịrị tọn 37, ịdị arọ nke imewe nwere ike ịbụ tọn 80 n'ezie, mana n'ihi obere akpa ahụ. , anyị na -ekwukarị Ikike ịdị arọ nke chassis bụ tọn 50, gbakwunyere ịdị arọ nke kreenu n'onwe ya. Na mgbakwunye, maka ihe nlereanya a, anyị nwere njikwa anya dị ka ọkọlọtọ. Njikwa ime ime nwere joystick na bọtịnụ. Enwere ụzọ abụọ iji jikọọ, otu bụ ijikọ waya, nke ọzọ bụ ijikọ na akara redio, ka ọ nwee ike rụọ ọrụ ngwa ngwa. Onye na -arụ ọrụ na -agagharị na akpa ahụ n'oge ọrụ, nke na -eme ka ọrụ gwongworo na -ahụ ọnọdụ dị elu site n'akụkụ dị iche iche wee belata ịdị adị nke ihe egwu.
5. Ọrụ a bụ iji mee ka ndị na -apụ apụ abụọ kwụsikwuo ike na ebe siri ike. Ejiri ụkwụ hydraulic 2 rụọ ọrụ, ị nwere ike ibuli igbe dị ihe ruru tọn 37. Ọ bụ ezie na onye na -apụ apụ nwere ike inye aka dozie ịdị elu na ala na -adịghị ahụkebe, anyị kwenyere na ọ dị mma ịrụ ọrụ na mbara ala, ọ na -emekwa ka oke nchekwa na oke ibu dị mgbe ị na -akwakọba arịa.
6. Chain nke na -ebu ihe. N'oge a na -eme mkpọtụ, a na -edozi ụdọ 4 ahụ site na elu mbuli elu n'akụkụ gaa na mkpọchi akpọrọ na ala nke akpa. Ị nwekwara ike họrọ iji mkpọchi njikọ akpa mba ọzọ iji dozie arịa abụọ dị 20 ụkwụ. Mgbe onye ọrụ ahụ gosipụtara na akpọchiri igbe abụọ abụọ nke ụkwụ 20 ma kwụsie ike, onye na-eburu akụkụ nwere ike ibugharị akpa ahụ dị ka akpa 40 ụkwụ. .
Oge ezipụ: Aug-01-2021